အယ်လ်တန် ဂျွန် - ဝီကီပီးဒီးယား
အင်္ဂလိပ် ရော့ခ် အဆိုတော်၊ သီချင်းဆရာနှင့် စန္ဒရားဆရာ
ဆာ အယ်လ်တန် ဟားကျူလိစ် ဂျွန် (အင်္ဂလိပ်: Sir Elton Hercules John) (မွေးဖွား : ၂၅-မတ်-၁၉၄၇) သည် အင်္ဂလိပ်လူမျိုး အဆိုတော်၊ တေးရေးသူ၊ စန္ဒယားတီးသူနှင့် တေးဖွဲ့ပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ၁၉၆၇မှစ၍ တေးရေးဆရာ ဘားနီ တောင်ပင်(Bernie Taupin)နှင့် ပူးတွဲလုပ်ကိုင်ခဲ့ကာ အခွေ (၃၀)ကျော်အထိ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ဖူးသည်။ တေးအခွေပေါင်း သန်း(၃၀၀)ကျော် ရောင်းချခဲ့ရသဖြင့် တေးသီချင်း/အခွေ ရောင်းအားအကောင်းဆုံးအနုပညာရှင်များအနက် တစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။  ယူကေသီချင်းဇယား၌ ထိပ်တန်းသီချင်း(၄၀) နှင့် ဘီလ်ဘော့ဒ်ဇယား ရေပန်းစားသီချင်း(၁၀၀)၌ အကြိမ်(၅၀)ကျော်ပါဝင်ခဲ့ပြီး ယူကေတွင် အဆင့်(၁) ခုနှစ်ကြိမ်၊ ယူအက်စ်တွင် အဆင့်(၁) ကိုးကြိမ်ရရှိခဲ့သည်။ ယူအက်စ်တွင် ၎င်း၏ အခွေအဆင့်(၁)ရရှိခြင်းသည် ခုနှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက် ရရှိခဲ့၏။  ၎င်းရေးသားသော ဂုဏ်ပြုသီချင်း လေထဲက ဖယောင်းတိုင် (Candle in the Wind 1997) သည် ၁၉၉၇ ခုနှစ်ကဖြစ်၍ ဝေလမင်းသမီး ဒိုင်ယာနာ ကိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ပြန်လည်ရေးသားခဲ့သော သီချင်းလည်းဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာအနှံ့ (၃၃)သန်းကျော် ရောင်းချခဲ့ရ၍ ယူကေ၊ ယူအက်စ် သီချင်းဇယားများ၏ သမိုင်းတွင် ရောင်းအားအကောင်းဆုံး သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်၏။ တေးသီချင်းအခွေများကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး ရုပ်ရှင်များတွင်လည်း အခါအားလျှော်စွာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ဝေါ့တ်ဖ(ဒ်) ဘောလုံးအသင်း (Watford F.C.) [မှတ်စု ၁] ကို ၁၉၇၆ မှ ၁၉၈၇ထိလည်းကောင်း ၁၉၉၇မှ ၂၀၀၂ထိလည်းကောင်း ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည်။ ထိုဘောလုံးကလပ်၏ တစ်သက်တာ ဂုဏ်ထူးဆောင် ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်၏။
၂၀၁၁ ထရီဘက်ကာ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်၌ ရှိသော အယ်လ်တန် ဂျွန်
ရက်ဂျင်နယ်လ် ကက်နက် ဒွိုက်တ်
(1947-03-25) ၂၅ မတ်၊ ၁၉၄၇ (အသက် ၇၄)
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ မစ်ဒယ်လ်ဆက်ဒေသ၊ ပင်းနားမြို့
လန်ဒန်နယ်မြေကြီး၏ ပင်းနားမြို့၌ ကြီးပြင်းခဲ့၍ ဂျွန်သည် ငယ်စဉ်၌ပင် စန္ဒယားတီးခြင်းကို လေ့လာသင်ကြားခဲ့သည်။ ၁၉၆၂တွင် အာအန်ဘီဂီတအဖွဲ့ (Bluesology) ကိုဖွဲ့စည်း ထိုအဖွဲ့၌ ၁၉၆၇ထိ တီးခတ်ခဲ့သည်။ ထိုနှစ်၌ပင် ၎င်း၏ သက်တမ်းအကြာရှည်ဆုံး ဂီတမိတ်ဆွေ တောင်ပင် (Taupin) ကိုတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ နှစ်ဦးစလုံးသည် သီချင်းရေးဆရာအလိုရှိသည်ဆိုသော ကြေညာများကို လျှောက်ထားခဲ့ကြပြီးနောက် ဆုံတွေ့ခဲ့ကြသည်။ အဆိုတော် လူးလူ (Lulu) အပါအဝင် အဆိုတော်များစွာအတွက် သီချင်းများရေးပေးခဲ့၍ ဂျွန်သည် the Hollies နှင့် the Scaffold တို့အပါအဝင် အနုပညာရှင်များအတွက်လည်း အချိန်ပိုင်းဂီတတီခတ်သူအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၉တွင် ၎င်း၏ ပထမဆုံးအခွေ ဟာလာဟင်းလင်းကောင်းကင် (Empty Sky) ကို ဖြန်ချိခဲ့သည်။ ပထမဆုံးနာမည်ကြီးသီချင်း မင်းရဲ့သီချင်း (Your Song) သီချင်းသည် ဂျွန်၏ ဒုတိယအခွေမှဖြစ်ကာ ထိုအခွေ၏ အမည်မှာ Elton John ဟုပေးထား၏။ ထိုအခွေသည် ယူကေ၊ ယူအက်စ်တွင် ထိပ်ဆုံး(၁၀)ခွေစာရင်းသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ဂီတအသားပေးရုပ်ရှင် (musical film)များနှင့် ပြဇာတ်များတွင်လည်း အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ကာ ကေသရာဇာခြင်္သေ့မင်း (The Lion King) ရုပ်ရှင်နှင့် ယင်းအမည်ဖြင့်ဂီတပြဇာတ်အတွက် တေးသီချင်းသီဖွဲ့ခဲ့သည်။ အေးဒါ အော်ပရာပြဇာတ် (Aida)၊ Billy Elliot ဂီတပြဇာတ် တို့ကိုလည်း ဂီတ၊ သီချင်းများ စပ်ဆိုပေးခဲ့သည်။
ဂျွန်သည် ဂရမ်မီဆု ငါးကြိမ်၊ ဘရစ်ဆုငါးကြိမ်၊ အကယ်ဒမီဆု နှစ်ကြိမ်၊ ရွှေကမ္ဘာလုံးဆု နှစ်ကြိမ်၊ တိုနီဆု၊ ဒစ်စနီဂန္ထဝင်ဆု၊ ကနေဒီဌာနဂုဏ်ပြုဆု တစ်ခုစီကို ရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၀၄၌ ရိုးလင်းစတုန်း မဂ္ဂဇင်းက ရော့ခ်အန်ရိုးလ်ခေတ်၏ ဩဇာညောင်းသော ဂီတပညာရှင် (၁၀၀)၌ (၄၉)အဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ ဘီလ်ဘော့ဒ်က ဘီလ်ဘော့ဒ် လူကြိုက်များအဆိုတော်(၁၀၀)၌ အအောင်မြင်ဆုံး အမျိုးသားတစ်ကိုယ်တော်အဆိုတော်အဖြစ် အဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ဘီတဲလ်စ်အဖွဲ့နှင့် မက်ဒေါနာ ပြီးလျှင် အဆင့် (၃)ဖြစ်သည်။  ရော့ခ်အန်ရိုးလ်ဂုဏ်ပြုချီးမြှောက်မှု (Rock and Roll Hall of Fame)ကို ၁၉၉၄တွင်လည်းကောင်း သီချင်းရေးဖွဲ့သူဂုဏ်ပြုချီးမြှောက်မှု (Songwriters Hall of Fame) ကို ၁၉၉၂တွင်လည်းကောင်း အသီးသီးရရှိခဲ့၏။ ဗြိတိသျှ တေးရေးဆရာ၊ တေးဖွဲ့သူ၊ စာရေးဆရာများ အကယ်ဒမီအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်သည်။ ဒုတိယမြောက် အဲလိဇဘတ်ဘုရင်မ၏ သူကောင်းပြုခြင်းကို ဂီတနယ်ပယ်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု၊ အလှူအတန်းပြုလုပ်မှုများမှ ၁၉၉၈၌ ရရှိခဲ့သည်။ ဂျွန်သည် ၁၉၉၇ခုနှစ် ဝေလမင်းသမီး ဒိုင်ယာနာ၏ ဈာပနအခမ်းအနားအား ဝက်စ်မင်စတာဘုရားရှိခိုးကျောင်းတော်ကြီး (Westminster Abbey) တွင်ပြုလုပ်ရာ၌လည်းကောင်း ၂၀၀၂ နန်းတော်ပါတီပွဲအခမ်းအနား၊ ၂၀၁၂ ဘက်ကင်ဟမ်နန်းတော်အပြင်ဘက် ဘုရင်မကြီး၏ စိန်ရတုဂီတဖျော်ဖြေပွဲ၌လည်းကောင်း စသည့်တော်ဝင်အခမ်းအနားများတွင် ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခဲ့သည်။
၁၉၈၀နှစ်များမှစတင်ကာ အေ့ဒ်စ်ရောဂါ (AIDS) တိုက်ဖျက်ရေးတွင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၂တွင် အယ်လ်တန်ဂျွန် အေ့ဒ်စ် ဖောင်ဒေးရှင်း ကိုတည်ထောင်၍ တစ်နှစ်အကြာတွင် ၎င်း၏နှစ်စဉ် အကယ်ဒမီဆုပါတီပွဲများ ကိုစတင်ဧည့်ခံပြီး ထိုပွဲများသည် ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းတွင်ကျင်းပသော အထင်းရှားဆုံးသောအော်စကာပွဲများထဲက တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ၎င်းအဖွဲ့စတင်ချိန်မှစ၍ ပေါင်သန်း(၃၀၀)ကျော်ထိ ရန်ပုံငွေများမြှင့်တင်နိုင်ခဲ့သည်။ လိင်တူ/ကွဲစိတ်ဝင်စားသူ (bisexual) တစ်ဦးအဖြစ်၁၉၇၆တွင် ကြေညာခဲ့ပြီး ၁၉၈၈မှစတင်ကာ ဂေးတစ်ဦး (လိင်တူခုံမင်သူ) အဖြစ်ပေါ်ပေါ်တင်တင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ David Furnishနှင့် ၂၀၀၅ ဒီဇင်ဘာတွင် လိင်တူ အတူနေအဖော်(civil partnership)ဖြစ်ခဲ့ကာ ၂၀၁၄၌ အင်္ဂလန်၊ ဝေလတို့တွင် လိင်တူလက်ထပ်ခြင်းကို တရားဝင်ခွင့်ပြုပြီးနောက် ထိုသူနှင့် လက်ထပ်ခဲ့သည်။ ဂျွန်ကို ပြင်သစ်၏ အမြင့်ဆုံး ပြည်သူ/သားဆု Legion d'honneurကို ၂၀၁၉တွင် ချီးမြင့်ခဲ့ကာ ပြင်သစ်သမ္မတ အီမန်နျူရယ် မက်ခရွန်က ၎င်းကို သံစဉ်ဂုရုကြီး (melodic genius)ဟုခေါ်၍ LGBT အဖွဲ့အစည်းအတွက် ၎င်း၏ဆောင်ရွက်ချက်များကို ချီးကျူးခဲ့သည်။ ၂၀၁၈တွင် သုံးနှစ်မျှကြာမည့် နှုတ်ဆက်ဂီတခရီးစဉ် (farewell tour)ကို စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
၁.၁ စတူဒီယို အခွေများ
[Rock of the Westies (1975)
Leather Jackets]' (1986)
The Union Leon Russell နှင့်အတူ (2010)
Good Morning to the Night Pnau နှင့်အတူ (2012)
The Lion King]] (1994)
Gnomeo & Juliet]' (2011)
↑ မြန်မာနိုင်ငံက အားကစားဂျာနယ်များတွင် ဝက်ဖို့ဒ် သို့ ဝက်ဖို့ ဟု ရေးသားကြသည်။ အမေရိကန်များက ဝါးတ်ဖ(ဒ်) ဟုအသံထွက်၏။
↑ Erlewine၊ Stephen Thomas။ Artist Biography [Elton John]။ AllMusic။ 31 March 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Elton John။
↑ Elton John (in en)။
↑ "BBC: Elton John to make statement on future"၊ BBC News၊ 24 January 2018။
↑ "Elton John"။5February 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Elton John on Being the Top Male Solo Artist of All Time"၊ Billboard။5February 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ RIAA News Room – The American Recording Industry Announces its Artists of the Century။ Recording Industry Association of America website။ RIAA (10 November 1999)။6October 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 8 February 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “'Candle in the Wind 1997' soon surpassed Bing Crosby's 'White Christmas' to become the best-selling single of all time.”
↑ Elton John: Biography – Rolling Stone Music။ Rolling Stone။ 27 September 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Guinness World Records 2009 states that "Candle in the Wind 1997" is the "best-selling single since charts began". John's 1997 song has sold the most copies when looking at copies sold since charts began, as verified in Guinness World Records။ ISBN 1-904994-37-7။ See also: Guinness World Records, 2009 Edition, pages 14, 15 & 169  Archived 26 February 2013 at the Wayback Machine.
↑ Oxford Advanced Learners Dictionary, 9th Edition
↑ The Immortals: The First Fifty။ Rolling Stone (2 December 2010)။ 25 June 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 22 March 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Hot 100 55th Anniversary by the Numbers: Top 100 Artists, Most No. 1s, Biggest No. 2s & More"၊ Billboard၊2August 2013။ 26 March 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ About: All About Elton: Bio။ Elton John။ 15 July 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။6August 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Elton John AIDS Foundation။ Ejaf.org။6August 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Butterworth၊ Benjamin။ "Sir Elton John emotional as he is awarded France's Legion d'Honneur for HIV Aids work"၊ i News၊ 22 June 2019။ 8 July 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Writer၊ Mesfin Fekadu AP Music။ A confident Elton John kicks off farewell tour with flair။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အယ်လ်တန်_ဂျွန်&oldid=712176" မှ ရယူရန်
၂၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၄:၂၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၄:၂၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။